Umxube waseJalimane Umalusi Husky: Ukubukeka Okujulile ku-Gerberian Shepsky - Izinhlobo
Umxube waseJalimane Umalusi Husky: Ukubukeka Okujulile ku-Gerberian Shepsky
Ngamehlo kagesi aluhlaza okwesibhakabhaka noboya obuntofontofo, inhlanganisela yaseGerman Shepherd Husky iyinhlanganisela ye Umalusi waseJalimane (GSD) kanye ne USuskyan Husky .
Le hybrid ihamba ngamagama amaningi eziteketiso, kufaka phakathi iGerberian Shepsky, i-German Husky, neSiberia Shepherd.
Lezi zinja zabaklami zichichima amandla futhi zinjalo unothando, uqaphile futhi uhlakaniphile . Futhi, lezi zimidondoshiya ezimnene ziyajabulisa ukuba khona ngenxa yesimo sazo esibi.
Kungani singazi inqwaba enkulu yenjabulo leyo Husky Shepherd ?
Uyini umsuka wenhlanganisela yaseGerman Shepherd Husky?
Ngabe ukubukeka kwenhlanganisela kaMelusi uHusky waseJalimane kubukeka kanjani?
Ingabe lokhu kuyinja enqamulelayo?
Yiziphi izidingo zomsebenzi we-Husky-GSD crossbreed?
Ungawuqeqesha kanjani umxube wase-German Shepherd Husky
Ukunakekelwa kwe-German Shepherd Mix: okudingeka ukwazi
Kuzobiza malini ukuba nomxube wase-German Shepherd Husky?
Ingabe umalusi waseJalimane u-Husky ukuxuba inja ekufanele?
Ukufunda Okuqhubekayo: Amamiksi amaningi aseSiberia Husky & amamiksi we-German Shepherd
Lokhu kuhlanganiswa kuyinhlanganisela yama-canine amabili we-powerhouse aziwa womabili ukwethembeka nobuhlakani . Umusha ngokwengeziwe emhlabeni wezinja zabaklami, ngakho-ke kuncane okwaziwayo ngomlando wakhe ngqo.
Esingakwenza ukubhekisisa uhlobo lomzali ngamunye nefa abalinikeze uHusky waseJalimane.
ISuskyan Husky nemvelaphi yayo
I- USuskyan Husky ibilokhu ikhona amakhulu eminyaka futhi isetshenziswa yisizwe samaChukchi eSiberia ukudonsa ama-sleds kanye ne-reindeer yokwalusa . Bangakwazi ukubhekana nesimo sezulu esibi futhi baziwa njengama-canine asebenza kanzima.
Lawa ma-purebreds abonwa njengawo ukukhuthazela nokushesha futhi kamuva balethwa e-Alaska ukuba babambe iqhaza emijahweni yase-Arctic esifundeni.
AmaHuskies ayesetshenziselwa okungaphezulu kokujaha nje, futhi. U-Admiral Byrd wasebenzisa ama-Huskies maphakathi nawo-1900 ohambweni lwakhe lwase-Antarctic . Lezi zinja ziphinde zasebenza ku Uphiko Lokusesha Nokutakula Lase-Arctic phakathi neMpi Yezwe II.
Kepha le minikelo ephawuleka kakhulu yama-canine kungaba enza isihlibhi esisindisa impilo eNome, e-Alaska ukuletha i-diphtheria antitoxin.
UMusher Leonhard Seppala noSuserian Huskies Balto futhi Ukuhamba baholele iphakethe lezinja ezijijelwe ngesivinini semayela elingama-674 - elibizwa ngeGreat Race of Mercy - abaligcwalise ezinsukwini ezinhlanu nohhafu nje.
I-American Kennel Club (AKC) yanikeza ukuqashelwa okusemthethweni kuSuskyan Husky e 1930 . Ngo-2018, i-AKC ibuye ibeke amaHuskies njenge- Uhlobo lwesi-14 oludume kakhulu lwezinja e-US.
Umalusi waseJalimane nomlando wawo
Umqondo wokuzalela onezinwele ezinde, izinwele ezimfishane, futhi uboshwe ngocingo ukufuya izinja futhi izinja zasepulazini wazala uhlobo esilwazi manje njenge Umalusi waseJalimane .
Umalusi wokuqala waseJalimane wanikwa igama UHorand von Grafrath ukaputeni wamasosha waseJalimane, uMax von Stephanitz. Kwakukholakala ukuthi bonke abelusi baseJalimane babevela eHorand.
Umlando walezi zinja ungalandelelwa emuva kwesikhathi Ama-1800 , futhi zabonakala okokuqala eHanover ngo-1882 futhi kamuva eBerlin ngo-1899.
Ngo-1907, kwavela ama-GSD e-US. Ngokushesha ngemuva kwalokho, iAmerican Kennel Club yamukela ngokusemthethweni lolu hlobo.
Ku-2018, abelusi baseJalimane bathole i- Indawo yesibili phakathi Izinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu yi-AKC .
Ama-movie adumile afana no-Strongheart no-Rin-Tin-Tin asize ukukhulisa ukuthandwa kwe-German Shepherd. Lolu hlobo lwaziwa ngokuba uhlakaniphile, uthembekile, futhi uyalalela .
Ukuqashelwa kohlobo lweHusky-Shepherd hybrid
Ngokungafani noSuskyan Husky kanye ne-GSD, njengamanje akaziwa yi I-American Kennel Club . Iningi lezinhlobo ezivundile azitholi ukuqashelwa okusemthethweni okuvela ku-AKC.
Le hybrid, noma kunjalo, yamukelwa yi-American Canine Hybrid Club kanye ne-Dog Registry of America Inc.
IGerberian Shepsky iyi- inja enkulu nge kwemisipha yakhiwe .
Inomzimba omude othembekile nemilenze eqinile, kanye nomsila omude onesihlahla.
Lezi zici zinikeza lokhu kweqa a ukubukeka okunamandla nenhle .
Ngokubukeka okufana nempisi, lawa ma-canine anekhanda elide nelikhombe, ikhala elide elimnyama, elinenkani, izindlebe eziqondile, nesifonyo esiqinile.
Njengomzali wayo onguHusky, uMalusi waseSiberia uvame ukuba naye amehlo ahlukile, amile okwe-alimondi, akhazimulayo okungaba nsundu noma luhlaza okwesibhakabhaka.
Eziningi zalezi nzalo nazo zinamehlo anombala o-parti noma anemibala emibili.
Futhi bane- ishidi eliminyene, eligqinsiwe kabili, elingenamanzi lokho kuthambile futhi kuyabhibha.
Imibala yayo yamajazi ingaba phakathi kokumnyama, nsundu nokumnyama, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, nokumhlophe, kuye kokusobala nokumhlophe, ukhilimu, usawoti kanye nopelepele, igolide, onsundu ngokukhanyayo, nampunga nonsundu.
Ngabe iShepsky yaseGerberian inkulu kangakanani?
Lezi zinhlayiya ezikhulayo zikhula ziye kubude obumaphakathi be- Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-25 (51 kuya ku-64 cm) , icishe ilingane nabazali babo abangaxutshiwe.
Futhi banesisindo esimaphakathi esukela phakathi Amakhilogremu angama-45 kuya kwangu-90 (20 kuya ku-41 kg).
Umxube wesilisa waseJalimane ongumalusi uHusky ngokuvamile okukhudlwana kunabalingani bayo besifazane. Abesilisa bavame ukufinyelela ukuphakama okugcwele kwe-crossbreed futhi babe nesisindo esiphakathi kwama-50 kuye kuma-90 lbs (23 kuya ku-41 kg).
Ngakolunye uhlangothi, abesifazane bayakhanya kancane, banesisindo esingu-45 kuye ku-72 lbs kuphela (20 kuya ku-33 kg).
Ngokuphambene nalokho, ingxube ye-GSD-Husky yaziwa njenge- mnene futhi uzolile iwele.
Inezici zombili zoMalusi waseJalimane njengenja esebenza ngisho nomnene futhi iSuserian Husky njengenja enkulu yomndeni.
Okwabo ukuvikelwa kwemvelo kuvela ohlwini lwabo lozalo lwe-GSD ngenkathi benobungane , ikakhulukazi nezingane, kuvela ohlangothini lwabo lwaseSiberia Husky.
Zihle kakhulu ngezingane, kepha lezi nzalo kungenzeka okusolisayo kwezinye izilwane ezifuywayo nabantu ongabazi .
Zingavikela ngokweqile futhi zibe yindawo futhi zingabonisa isimilo esinolaka , uma kungahlanganiswa kahle kahle esemncane.
UHusky waseJalimane nokukhonkotha
Lezi zinhlobo eziwela izimbali ziyaziwa ukuthi zikhona ukukhonkotha okukhulu nokudlulele , sibonga uthando lukaHusky lokuzwakalisa izwi kanye nokuthambekela kwemvelo kwe-GSD yokukhonkotha.
Ungamangali ukuzwa uHusky-Shepherd wakho exuba 'ekhuluma' nawe, ekhonela ukunakwa kwakho, noma ekhonkotha ngokuphazamiseka okuncane ekhaya.
Ngaphambi kokuba uthole le ngxube, kufanele ubheke ngokucophelela ukuthi umsindo uzoba ukuphazamisa yini komakhelwane bakho.
Mane ulalele umsindo ongenziwa ngumalusi waseSiberia:
Kokubili uMalusi waseJalimane noSusky waseSiberia izinja ezinamandla amakhulu. Ungalindela ukuthi ukuhlanganiswa kukaMelusi-Husky kudinge umsebenzi omningi womzimba nokuvuselelwa kwengqondo, futhi.
Njengenja esebenzayo kakhulu, udinga mayelana Ukuzivocavoca imizuzu engu-120 ngosuku , engahlukaniswa ngezinyawo ezihamba ngehora kabili ngosuku. Lezi nzalo zinamandla anele okuzenza nxazonke Ukuhamba amamayela ayi-11 masonto onke.
Kufanele kube nesikhala esanele ekhaya lakho ukuze inja yakho izulazule ngokukhululeka futhi ihlole. Ngaphandle kwalokho, yisa umdlwane wakho ku ipaki yenja ukuhamba amahora ambalwa, ukuzulazula, nokudlala nezinye izinja.
Ukulanda, ukubamba ama-frisbees, ne-flyball yimisebenzi emihle ongayenza ngomxube wakho wase-German Shepherd-Husky. Le midlalo esebenzayo izomnika ngokwanele nsuku zonke ukukhuthazeka ngokwengqondo nangokomzimba .
Ukuzivocavoca umzimba okwanele nsuku zonke kusiza ukugcina ukuziphatha kwenja yakho kuhlolwe. Ungagwema izinkinga ezingaba khona njenge ukukhonkotha ngokweqile, ukuhlafuna nokuhhewula ngokugcina inja yakho imatasa usuku lonke.
Njengoba kunikezwe izidingo zomsebenzi wayo, lokhu kuvundlulwa kungenzeka kungabi yisilwane esifanelekile samazambane asembhedeni noma abanikazi abafuna inja nje ukuthi igodole nayo.
Lokhu kuyakhazimula futhi ukuqeqeshwa kakhulu inja. Angathatha imisebenzi elula ngemuva kwezifundo ezimbalwa futhi alalele ngemuva kokunikezwa umyalo wokuqala.
Uhlala ezimisele ukufunda nokujabulisa umnikazi wakhe, ngakho-ke ukuqeqeshwa kufanele kube yinto ezuzisayo.
Ukuzibandakanya komphakathi kudinga ukuqalwa ngenkathi lokhu kweqa okuncane kusencane. Ukuqeqesha kahle uMalusi wakho waseSiberia kufanele kubandakanye ukuqina, ukungaguquguquki, nokuqiniswa okuhle ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
Ukuqeqeshwa kwe-Agility futhi kuyindlela enhle yokugcina lokhu kuhlakazekile kuhleliwe, ikakhulukazi njengoba i-GSD ihamba phambili kulo mdlalo.
Lo msebenzi uhilela egijima enkambweni yezithiyo ngenkathi uthobela imiyalo ethile enikezwe ngumqeqeshi. Ukushesha kungenziwa emapaki amaningi ezinja zomphakathi anemishini etholakala kalula.
Umalusi waseJalimane esivivinyweni sokushesha kwenja
Funda ukwenza imiyalo elula efana “Hlala,” “hlala,” “hamba,” “nesithende” ngaphambi kokuqala inja yakho ekuqeqeshweni kwe-agility. Letha ukuphatha okuningi ukukhuthaza umdlwane wakho ngenkathi zifunda.
Ngezansi kunamanye amathiphu amahle kakhulu angakusiza ekuqeqesheni i-Husky-GSD yakho yokuxuba umdlwane:
1. Qala ukuqeqesha i-pup yakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ukuzijabulisa, ukuqeqeshwa endlini , nokuqeqeshwa kokulalela kufanele kuqale ngenkathi inja yakho iwumdlwane.
Ngale ndlela, inja yakho ifunda ukuthi ingaxhumana kanjani kahle nemvelo yayo futhi yamukele indlela efanele yokuziphatha, enizoyidinga nobabili emisebenzini yenu yansuku zonke.
Umuntu ngamunye ukuqeqeshwa kwe-puppy futhi kuqinisa isibopho phakathi kwakho nenja yakho.
2. Hola futhi uthande umdlwane wakho ngaphambi kokuba uwuqale kunoma yikuphi ukuqeqeshwa.
Izinja ziyizilwane eziqoqiwe ngokwemvelo, kanti umdlwane wakho uyakudinga umholi wepakethe .
Kufanele uhlale unayo i- igama lokugcina futhi umfundi wakho kufanele afunde ukuthi imiyalo yakho akumele iphonselwe inselelo.
Kodwa-ke, lokhu akusho ukuba nonya enja yakho. Ukuhlanganiswa kwakho kwe-German Shepherd Husky kudinga uthando lwakho, ukunakekelwa, nokwethenjwa njengobuholi bakho.
3. Ukuqinisa okuhle kufanele kusetshenziswe njalo.
Imivuzo nokudumisa kungcono kunokujezisa nokulawula umdlwane wakho kakhulu.
Hlanganisa ukuqeqeshwa nemiyalo ku- imizwelo emihle futhi ingxube yakho yeHusky-Shepherd izofunda isimilo esihle ngokushesha okukhulu.
4. Gcina izikhathi zakho zokuqeqesha zifushane.
Imidlwane yaseGerberian Shepsky ingaphazamiseka kalula, ngakho-ke kufanele ugcine izikhathi zokuqeqesha ukuze Imizuzu eyi-10 kuye kwengu-20 ubude . Izikhathi ezimfushane ziqinisekisa ukuthi inja yakho ihlala inentshisekelo yokufunda izinto ezintsha.
Kungakuhle futhi ukuhlanganisa i- khipha igama noma nini lapho uqeda ngokuqeqeshwa kwakho ukuze umdlwane wakho wazi ukuthi kuphelile ngosuku.
Isitatimende esilula esifana nokuthi “siphelile” sisho kahle futhi ngokujabula kufanele sanele.
5. Ukuqeqesha kuhilela imiyalo emifushane, ecacile.
UHusky Shepherd wakho uzolandela imiyalo yakho ngokuya ngokuthi uyichaza kanjani.
Imiyalo yakho kufanele ibe icacile futhi iqondakala kalula ukuze umdlwane wakho ungadideki futhi inqubo yokuziqeqesha izosebenza.
Ukuphinda umyalo oyisisekelo ngemuva kokuthi inja yakho ikufundile kubalulekile.
6. Fundisa umdlwane wakho ikhono elilodwa ngasikhathi.
Dlulela ku isifundo esisha ekuziqeqesheni kwakho kuphela lapho inja yakho isifunde kahle isifundo noma ikhono langaphambilini.
Lokhu kugcina ingane yakho ingadideki ekufundeni imiyalo eminingi ngasikhathi sinye.
7. Ukuphatha kanye namabhande kufanele kusetshenziswe kancane.
Nciphisa ukusetshenziswa kokuphatha ngoba ukuphatha okuningi kakhulu kuzokwenza inja yakho ukukhuluphala ngokweqile , futhi ukusebenza kokuphatha ngesikhathi sokuqeqeshwa kuncishisiwe.
Ukuqeqeshwa kweLeash kuhle, kepha ngeke kudingeke ukuthi ukusebenzise ikakhulukazi lapho umdlwane wakho ungeyona ingozi kwabanye.
Ufuna inja yakho ikulalele ngaphandle kwayo inkululeko yokuzikhethela , hhayi ngoba ezizwa esongelwa noma enqunyelwe yi-leash.
8. Funa usizo lochwepheshe lapho uludinga.
Lapho umdlwane wakho ukhombisa izimpawu ze ulaka noma uma ekhona inenkani ngaphandle kwezifundo zakho eziphindaphindwayo, cabanga ngokufuna usizo lomqeqeshi oqeqeshiwe.
Umqeqeshi oqeqeshiwe uzokwazi ukuthi yini okufanele ayenze ukugcina ukuziphatha kwakho kwe-pooch kuhlola.
Xwayiswa kusengaphambili: i-Husky yaseJalimane idinga i-TLC ethe xaxa kunezinhlobo eziningi eziwela izimbali.
Kodwa-ke, uzothola ukuthi umzamo wakho uzobufanele ubungani nokwethembeka le nja engakunika kona.
Inja kumele idle malini?
Zidinga okungenani 3 izinkomishi zokudla kwenja ngosuku , ihlukaniswe kabili. Kungcono ukuhambela i-kibble esezingeni eliphezulu enokuqukethwe okunothe kwamaprotheni.
Badinga okungenani Amaprotheni angama-25% lapho ekudleni okusanhlamvu futhi Amaprotheni angama-30% ngohlelo lokudla olungenamabele.
Inja yakho izohlomula kusuka izithako ezihlangene , okuzokhuthaza ukukhula koqwanga nokusiza ekuthuthukiseni ukuhamba. Lokhu kungasiza kakhulu inja esebenzayo kakhulu njengesiphambano se-Shepherd-Husky.
Izithelo ezinjengama-apula, ama-blueberries, amawolintshi, ukhukhunathi, amapheya, amakhabe, namaphayinaphu zingangezwa ekudleni kweGerberian Shepsky yakho, kodwa lezi ukudla kufanele inikezwe amanani alawulwayo .
Yini ongayondli i-Gerberian Shepsky yakho
Izinja zine-vitamin C eyanele ezibindi zazo, ngakho-ke asikho isidingo sokunikeza inja yakho noma iyiphi Ukudla okunothe Vitamin C .
Akufanele wondle inja yakho okusanhlamvu nokudla okune-fiber eningi kungaba ngoba lezi azikwazi ukudilizwa ngohlelo lwazo.
Anyanisi, ushokoledi, u-ayisikhilimu, noma amathambo e-ham akufanele zinikezwe lezi zinja futhi ngoba lokhu kudla kungaphazamisa ukusebenza kwazo komzimba.
Futhi, noma ngabe ngabe uHusky wakho waseJalimane ucela kangakanani, gwema ukumnikeza ukudla okulula okunosawoti okufana nakho ama-popcorn noma ama-chips amazambane .
Ukudla usawoti ngokweqile kungadala isifo sohudo, ukuhlanza nokuwa kwenja yakho.
Ukulungisa ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Husky
Umxube waseJalimane Shepherd Husky une- ijazi elikabili elijiyile , eliyifa njengefa leSuserian Husky neJalimane Shepherd.
Leli jazi elihle le-crossbreed lidinga ukunakekelwa okujwayelekile ikakhulukazi njengoba eyi- isheduli esindayo .
Ukuxubha kabili kathathu ngesonto izogcina ingubo yomdlwane wakho icwebezela, ithambile, futhi ingenaziphazamiso. Ukuxubha njalo kusiza nokugcina ukuchitheka ngaphansi kolawulo futhi kususe izinwele ezifile engubeni.
Isikhathi sasehlobo yilapho uHusky Shepherds echitha khona kakhulu. Ukuxubha nsuku zonke kufanele wenze ubuqili, noma ngabe ukulungele ukwenza isabelo sakho esifanelekile sokuhlanza lapho ukuzilungisa sekuqedile.
Lezi zinqamulelayo zijabulela amanzi kakhulu ngakho ukugeza akufanele kube yinkinga. Ugeza inja yakho kuphela lapho kunesidingo ngakho-ke ngeke aphucwe uwoyela wemvelo ejazini lakhe.
Ukuhlolwa kwezindlebe kanye ukuhlanza kufanele kwenziwe kanye ngeviki . Sebenzisa indwangu emanzi ukususa ukwakhiwa kwe-wax okusindayo ezindlebeni ze-canine yakho. Amehlo akhe nawo kufanele ahlolwe . Uma kukhona noma iyiphi i-gunk emakhoneni wamehlo enja yakho, thintana nodokotela wezilwane wakho ngasikhathi sinye.
Izipikili kufanele zibe kunqanyuliwe kanye ngenyanga ukugwema ubuhlungu obukhulu be-paw nomdlwane wakho. Yenza izinzipho zakho ze-pooch zigundiwe ngumlungisi wezingcweti uma ungakhululekile ukuzenzela ngokwakho.
Xubha amazinyo enja yakho kanye nsuku zonke . Qaphela izimpawu zokwakhiwa kwamapuleti. Amathambo, i-kibble eyomile, nokuhlafuna amathoyizi nakho kuzosiza ekugcineni amazinyo e-pup yakho ehlanzekile.
Izinkinga zezempilo zoMalusi waseSiberia
Ama-crossbreeds kuthiwa anempilo kunezihlobo ezihlanzekile. Kodwa-ke, inhlanganisela yaseGerman Shepherd Husky ingahle ithambekele kwabanye izimo zezempilo ezibalulekile ukuze lidle ifa kubazali bayo.
Ngezansi kukhona okunye okuningi izindaba ezivamile zezempilo ukuthi le hybrid ingahlupheka kusuka:
Elbow futhi i-hip dysplasia - Lokhu kwenzeka lapho amalunga engazinzile noma evulekile. Lokhu kungagwenywa ngokugcina iShersky yakho yaseGerberian isisindo esinempilo ukuze kungabi khona ukucindezeleka okungafanelekile kumajoyini akhe.
I-corneal dystrophy - Lesi yisimo lapho impahla engajwayelekile ihlangana khona engxenyeni engaphandle yeso noma i-cornea. Ikhula kancane futhi ithinta amehlo womabili futhi ingadala ukulahleka kombono.
Ukuqhubekela phambili kwe-retrophy retrophy - Lokhu inkinga yamehlo kungenzeka empilweni yakamuva yenja yakho futhi kungaholela ekungaboni ngokwengxenye noma ngokuphelele. Ezinye zezimpawu zokuqala zifaka ukungaboni ebusuku, ukungakwazi ukubona ekukhanyeni okukhanyayo, nabafundi abahlanzekile.
I-cataract yezingane - Lokhu kugula kungenzeka kungaqali kuze kube inja ineminyaka eyisithupha ubudala. Ama-lens wamehlo aqala ukubonakala futhi abangele ukufiphala okuncane embonweni kuze kube yimpumputhe ngokuphelele ezimweni ezibucayi.
Ezinye izimo zempilo uHusky waseJalimane uthambekele ekuzibandakanyeni ukuphazamiseka kwegazi , bloat, futhi isithuthwane
Siphila isikhathi esingakanani lesi siphambano?
Ukuhlanganiswa kwakho kwe-German Shepherd Husky kunesikhathi sokuphila esimaphakathi Iminyaka engu-10 kuya kwengu-13 . Angaphila isikhathi eside kunaleso, kuye ngezici ezifana nokudla kwakhe, impilo, izakhi zofuzo, nezinga lokuvivinya umzimba.
Njalo qaphela noma yikuphi izimpawu zokugula enjeni yakho. Unganqikazi ukubonisana nodokotela wezilwane wakho lapho ubona ushintsho olungazelelwe emzimbeni noma ekuziphatheni kwakho kukaHusky-Shepherd.
Ngokuya ngokuthi uhlala kuphi, izindleko zokuqala ezifana nezesekeli, izinqubo zokwelashwa ezifana nokugoma kanye ne-neutering zingahle zibe $ 415 kuya ku- $ 500 .
Izindleko zokwelashwa zaminyaka yonke njengokuhlolwa phakathi $ 485 kuya ku- $ 600 .
Ngakolunye uhlangothi, izindleko ezingezona ezokwelapha minyaka yonke njengokuqeqeshwa, ukudla, nezinsizakalo zokuzilungisa, kungabiza kuze kufike ku- $ 1100 .
I-German Shepherd mix puppy ingabiza nxazonke $ 350 kuya ku- $ 850 , ngokwesilinganiso.
Ungabheka phezulu USuskyan Husky futhi Abalimi baseJalimane abelusi ukuthola imininingwane yokuthi ungazithenga kuphi izinhlobo zezinja zalezi zinja:
UBama Huskies (E-Alabama)
U-Aruff waseSiberia Huskies (EMinnesota)
IHollow Hills Abelusi BaseJalimane (EPennsylvania)
Amberg Shepherds House (ICalifornia neVirginia)
Ngakolunye uhlangothi, kukhona futhi amawebhusayithi okwamukela ukuvakashela uma kwenzeka unentshisekelo yokwamukela umdlwane we-GSD-Husky. Hlola Ukuhlengwa kwe-Arctic (Utah), IHusky House (ENew Jersey), noma Ukusindiswa Kwabelusi BaseWestide German (Los Angeles) ngolwazi lokwamukela
Uma ufuna inja enobungani, enamandla amakhulu ukuba ngumngani wakho othembekile we-canine eminyakeni ezayo, khona-ke iGerberian Shepsky ngokungangabazeki ilungele wena.
IGerberian Shepskies iyona abangane abaqotho nabanothando . Bangabanye bezinja eziqaphe kakhulu, futhi ubuhlakani babo benza kube lula ukuziqeqesha.
Noma kunjalo, lawa ma-canine adinga ukuzivocavoca okuningi futhi ingahle ingalungeli abantu abaphila impilo yokuhlala phansi. Baphinde bachithe kakhulu futhi badinga ukulungiswa nsuku zonke.
Ngabe ucabanga ukuthi le nja iwufanele umzamo? Phawula ngezansi uma uke waba nokuhlangenwe nakho nge-Gerberian Shepsky.
UCorgi Husky Mix
I-Pitbull Husky Mix
Ukuhlanganiswa kweGerman Shepherd Golden Retriever
I-Texas Heeler: Amaqiniso ayi-14 Ongakaze Uwazi Ngayo Inja Yezinkomo YaseTexas
IGolden Retrievers vs. Labradors: Iyiphi inja ehamba phambili?
Ishadi lokukhula eliluhlaza okwesibhakabhaka
abiza malini ama-bulldogs aseFrance
red amakhala pitbull kanye boxer mix